Feeryahankii caanka ahaa ee Mike Tyson oo ka sheekeeyey khasaaraha hantidiisa ee… – Hagaag.com
Posted on 12 Oktoobar 2019 by Admin in Sports // 0 Comments
Muuqaal la soo galiyay baraha bulshada ayaa muujinaya feeryahan hawlgab ah ee Mareykan Mike Tyson isagoo ka hadlaya khasaaraha hantidiisa ee $ 400 milyan, oo ay ku jirto 4.5 milyan oo 24 bilood gudahood ku dheelay markii laga soo daayay xabsiga.
Xiddigii hore ee feerka adduunka ee miisaanka culus ayaa muddo 24 bilood ah ku kharash gareeyay malaayiin oo ku iibsaday baabuuro iyo baaskiillo,wuxuu masaruuf ahaan u kharash gareyn jiray bishii $ 240,000 bil kasta, iyo $ 100,000 oo ku kharash gareeyey dahab iyo dhar, halka $ 400,000 ku iibsaday shimbiro iyo xayawaan iyo guri leh 38 musqulood.
Wuxuu sidaasi u cadeeyay barnaamij Mareykan ah “Tani waa sidaan ugu noolaa nolosheydii hore, waxaan ahaa qof balwad leh oo isla weyn oo masaakiin ah oo aan waxba haysan, waan xanaaqsanaa, waxaan dareemayey shucuur xanaaq ah kadib markii aan ka soo baxay xabsiga.”
Wuxuu ku daray in Adduunkan aan loogu talogelin kuwa wax ku qaada xoog ama muruq laakiin ku shaqeeya xoogga fikirka.
Tyson ayaa gaartay deyntiisa $ 15 milyan kadib markii uu khasaariyey lacagtii uu kasbaday intii uu ku guda jiray howlahiisa feerka.
“Ma dhaleeceyn karo qofna, waxaan ahaa doqon oo khasaariyey hantideyda. Waqti fiican ayaan soo qaatay. Kuma nooli waqtigii hore. Waan noolahay oo awoodaa inaan daryeelo gurigeyga iyo caruurtayda. Aad ayaan u faraxsanahay.”
Ciyaartoygii hore ee feedhka, oo lagu naaneeso feeryahankii birta ama xadiidka, ayaa lagu eedeeyay inuu adeegsaday daroogo iyo kufsi boqoradda quruxda Afrika, wuxuu galay xabsi sanado ka hor inta uusan ka soo bixin asaga oo shaaca ka qaaday inuu qaatay diinta Islaamka.
Wuxuu carrabka ku adkeeyay in xabsiga uu ku qaatay kibirkiisa, uuna siiyay fursad uu ku barto Diinta Islaamka oo ka bartay sida loo sabro, wuxuu ugu mahadceliyey Allah xataa wixii ku dhacay.